Ukhuluma ngani ulimi lomzimba lukaMeghan Markle? - Indlela yokuphila 2022
Ukhuluma ngani ulimi lomzimba lukaMeghan Markle?
Ukuqomisana nenkosana yaseBrithani kuwumsebenzi onovalo kakhulu.
UMeghan Markle ungumlingisi onguchwepheshe ojwayele ukuba sesidlangalaleni. Kodwa-ke, ukunaka okwawela kuye ngenxa yokuthandana kwakhe neNkosana uHarry kubonakala kwenza intombazane izizwe ingekho.
U-Elisabeth Kuhnke, umbhali wencwadi ethi "Body Language for Dummies", waphawula ukuthi lapho engaphansi kwamehlo amakhamera, inkosikazi yesikhathi esizayo yenkosana yaseBrithani ihlale ithinta izinwele zayo, iqondisa izinwele zayo eziphelele kakade. Lokhu kubonisa ukuthi uMeghan Markle uzizwa engakhululekile: ezingeni elingokomfanekiso, ukuqondisa izinwele kuwumzamo wokusungula ukuhleleka kwezinxushunxushu ezizungezile.
Ingane, engaphansi kwengcindezi esimweni esingaziphathi kahle, incindezela ithoyizi eligxilile, isiketi sikamama noma isandla sikababa, kusho u-Elisabeth Kuhnke. - Ngokuqondene noMeghan Markle, uyaqonda ukuthi izigidi zabantu emhlabeni jikelele zimbheke ngokucophelela zonke izinyathelo, futhi lokhu kumenza abe novalo. Ukuze ngandlela-thile ehlise umoya, uhlala etshekisa ikhanda lakhe futhi eqondisa izinwele zakhe, ngaleyo ndlela ezama ukuzivikela futhi ehlise umoya …
Kuyinto eyodwa ukuba inkanyezi yombukiso, kodwa kungenye into ukunquma ukuba yilungu lomndeni wasebukhosini odume kakhulu emhlabeni. Okulindelekile, yiqiniso, kuhluke kakhulu ngokoqobo, kodwa kwenzeka okufanayo kanye noKate Middleton, ngakho uMeghan Markle udinga nje isikhathi sokujwayela indima yakhe entsha, ngemva kwalokho angajabulela impilo ejabulisayo nenhle yomkakhe nsuku zonke. inkosana yangempela …
Izimo zengqondo ezi-5 ezikuvimbela ukuthi uphumule futhi ufunde olunye ulimi
Siqoqe izaba ezidume kakhulu zokungafundi ulimi lwakwelinye izwe, futhi saziphika - ngeke ukwazi ukuzithethelela! Thola kusizindalwazi sethu ukuthi ungazinqoba kanjani izimo zengqondo ezingezinhle ezikuvimbela ukuthi ufunde olunye ulimi
Imishado yosaziwayo: kwavela imidwebo yokuqala yengubo yomshado kaMeghan Markle
Imidwebo emi-3 yokuqala yengubo yomshado ka-Meghan Markle evela kumklami wase-ihrailian wemfashini yakusihlwa neyomshado ivele ku-inthanethi
Hlela kusengaphambili ukuhlukana kwenu: nini futhi ngani?
Lapho ubuhlobo buhlukana, ngisho noma umuntu ezifuna ngokwakhe, ukuhlukana kunzima kakhulu. Ukuze uqede ukuhlukana kalula, kubalulekile ukulungiselela le nqubo
Indlela yokuthola ulimi oluvamile nengane yesigamu sesibili: zihlomise ngeseluleko sesazi sokusebenza kwengqondo
Noma yini engenzeka ekuphileni kwethu … Ingabe umphefumulo wakho womshado unezingane zomshado wangaphambili? Uyazi ukuthi ungaluthola kanjani ulimi olujwayelekile nabo? Lalela iseluleko sesazi sokusebenza kwengqondo kanye nochwepheshe wephrojekthi "Oqokelwe uTata" u-Valeria Kot-Sotnichuk